ရခေဲနတေဲ့ အန်တာတိတျပငျလယျပွငျကွီးအောကျမှာ ၈ မိနဈခနျ့ရကေူးနိုငျခဲ့တဲ့ အံ့ဖှယျလူသား။ – SoShwe
Home/LifeStyle/ရခေဲနတေဲ့ အန်တာတိတျပငျလယျပွငျကွီးအောကျမှာ ၈ မိနဈခနျ့ရကေူးနိုငျခဲ့တဲ့ အံ့ဖှယျလူသား။
ရခေဲနတေဲ့ အန်တာတိတျပငျလယျပွငျကွီးအောကျမှာ ၈ မိနဈခနျ့ရကေူးနိုငျခဲ့တဲ့ အံ့ဖှယျလူသား။
So Shwe February 24, 2022	LifeStyle Leaveacomment
ကမ်ဘာကွီးကလညျး နစေ့ဉျနဲ့အမြှ အံ့ဖှယျရာတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနပေါတယျ။ အံ့ဖှယျကမ်ဘာကွီးထဲမှာလညျး အံ့ဖှယျလူသားတှေ ရှငျသနျနထေိုငျနပွေီး ကမ်ဘာလောကကွီးကို ပိုမိုအံ့သွဖှယျကောငျးအောငျ လုပျနကွေပွနျပါတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့ လူအမြားစုဟာ အလှနျအေးခဲတဲ့ ရာသီဥတုမြိုးမှာဆိုရငျ သုံးရကျ (သို့) လေးရကျလောကျနမှေ ရခြေိုးလရှေိ့ပွီး ရမေခြိုးထားတဲ့နတှေ့မှောဆိုရငျလညျး အပွငျသှားစရာကိစ်စတှပေျေါပေါကျလာပါက ရမှေေးလေးဖွနျး ၊ အမှေးဆီလေးတှလေိမျးပွီး အပွငျထှကျလရှေိ့ပါတယျ။ တဈနတေ့ဈခေါကျရမေကူးရရငျ မနနေိုငျသူတှတေောငျမှ အေးစကျနတေဲ့ ရာသီဥတုမြိုးမှာ ရကေူးမယျလို့ မထငျပါဘူးနျော။
ဒါပမေဲ့ အသကျ ၅၀ အရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ Lewis Pugh ဆိုသူဟာ ဆောငျးတှငျးလရေဲ့ ထိပါးတိုကျခတျမှုကွောငျ့ အေးခဲနတေဲ့ရကေနျထဲမှာ ရကေူးတာမဟုတျဘဲ ရခေဲတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနတေဲ့ အန်တတိတျရခေဲပွငျကွီးမှာ နှဈပေါငျး ၃၃ နှဈခနျ့ ရကေူးဝတျစုံဝတျပွီး ရကေူးလကေ့ငျြ့ခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီလောကျအေးခဲနတေဲ့ ရခေဲပွငျထဲမှာမှ ရကေူးခငျြရတဲ့ Lewis Pugh မှာ အမြားနဲ့မတူ ထူးခွားတဲ့ခံယူခကျြ (သို့) ရညျမှနျးခကျြတဈခုခုတော့ ရှိနိုငျတယျလို့ မထငျဘူးလား ? အမှနျတော့ Lewis ဟာ ကမ်ဘာ့ပထမဦးဆုံးသော ရခေဲပွငျမှာ ရကေူးနိုငျတဲ့ ရကေူးခနျြပီယံတဈဦးဖွဈလာဖို့ဟာ သူ့ဘဝရဲ့ အကွီးမားဆုံးသော ရညျရှယျခကျြပဲ ဖွဈပါတယျ။ Lewis ဟာ ရကေူးတဲ့အခါမှာလညျး ဝေးလံခေါငျသီပွီး ရခေဲတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနတေဲ့ ပငျလယျသမုဒ်ဒရာထဲမှာပဲ ရကေူးခွငျးဖွဈပါတယျ။
နှဈပေါငျး ၃၃ နှဈအကွာ ရခေဲပွငျမှာ ရကေူးလကေ့ငျြ့ခဲ့တဲ့ Lewis တဈယောကျ မကွာသေးခငျတုနျးက ရခေဲနတေဲ့ ရခေဲပွငျကွီးအောကျမှာ ၈ မိနဈနီးပါး ပြျောရှငျစှာရကေူးနတေဲ့ သူ့ရဲ့ရကေူးနိုငျစှမျးကို တဈကမ်ဘာလုံးကို ကွှားလုံးထုတျခဲ့ပါတယျ။ ၈ မိနဈဆိုတော့ စက်ကနျ့ပေါငျး ၄၈၀ ဖွဈကာ Lewis ရဲ့ ခံနိုငျရညျအားကိုတော့ ကွညျ့ရှုသူတှကေ အံ့သွမဆုံးဖွဈခဲ့ရပါတယျ။
Lewis က “ဘယျနရောကိုကွညျ့ကွညျ့ ပြျောနတေဲ့ရခေဲတှကေိုပဲမွငျရမှာဖွဈပွီး ဒါထကျပိုပွီးသဘောကဖြို့ကောငျးတာကတော့ ပငျလယျသမုဒ်ဒရာကွီးရဲ့ တညျငွိမျအေးခမျြးနမှေုကွီးပါ။” လို့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
Lewis ဟာ အဆိုပါ ရခေဲပွငျကွီးမှာ ရကေူးတာကို အပြျောသဘောမြိုးလုပျတာမဟုတျဘဲ ရာသီဥတုရဲ့ ဖောကျပွနျပွောငျးလဲမှုကို လူတှကေို သတိပေးခငျြလို့ ပွုလုပျရခွငျးဖွဈကွောငျးကိုလညျး ထညျ့သှငျးပွောကွားခဲ့ပါသေးတယျ။
ရေခဲနေတဲ့ အန္တာတိတ်ပင်လယ်ပြင်ကြီးအောက်မှာ ၈ မိနစ်ခန့်ရေကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ အံ့ဖွယ်လူသား။
ကမ္ဘာကြီးကလည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အံ့ဖွယ်ရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ အံ့ဖွယ်ကမ္ဘာကြီးထဲမှာလည်း အံ့ဖွယ်လူသားတွေ ရှင်သန်နေထိုင်နေပြီး ကမ္ဘာလောကကြီးကို ပိုမိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းအောင် လုပ်နေကြပြန်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လူအများစုဟာ အလွန်အေးခဲတဲ့ ရာသီဥတုမျိုးမှာဆိုရင် သုံးရက် (သို့) လေးရက်လောက်နေမှ ရေချိုးလေ့ရှိပြီး ရေမချိုးထားတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်လည်း အပြင်သွားစရာကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပါက ရေမွှေးလေးဖြန်း ၊ အမွှေးဆီလေးတွေလိမ်းပြီး အပြင်ထွက်လေ့ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်ခေါက်ရေမကူးရရင် မနေနိုင်သူတွေတောင်မှ အေးစက်နေတဲ့ ရာသီဥတုမျိုးမှာ ရေကူးမယ်လို့ မထင်ပါဘူးနော်။
ဒါပေမဲ့ အသက် ၅၀ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Lewis Pugh ဆိုသူဟာ ဆောင်းတွင်းလေရဲ့ ထိပါးတိုက်ခတ်မှုကြောင့် အေးခဲနေတဲ့ရေကန်ထဲမှာ ရေကူးတာမဟုတ်ဘဲ ရေခဲတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ အန္တတိတ်ရေခဲပြင်ကြီးမှာ နှစ်ပေါင်း ၃၃ နှစ်ခန့် ရေကူးဝတ်စုံဝတ်ပြီး ရေကူးလေ့ကျင့်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်အေးခဲနေတဲ့ ရေခဲပြင်ထဲမှာမှ ရေကူးချင်ရတဲ့ Lewis Pugh မှာ အများနဲ့မတူ ထူးခြားတဲ့ခံယူချက် (သို့) ရည်မှန်းချက်တစ်ခုခုတော့ ရှိနိုင်တယ်လို့ မထင်ဘူးလား ? အမှန်တော့ Lewis ဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးသော ရေခဲပြင်မှာ ရေကူးနိုင်တဲ့ ရေကူးချန်ပီယံတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ဟာ သူ့ဘဝရဲ့ အကြီးမားဆုံးသော ရည်ရွယ်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Lewis ဟာ ရေကူးတဲ့အခါမှာလည်း ဝေးလံခေါင်သီပြီး ရေခဲတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာပဲ ရေကူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်ပေါင်း ၃၃ နှစ်အကြာ ရေခဲပြင်မှာ ရေကူးလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ Lewis တစ်ယောက် မကြာသေးခင်တုန်းက ရေခဲနေတဲ့ ရေခဲပြင်ကြီးအောက်မှာ ၈ မိနစ်နီးပါး ပျော်ရွှင်စွာရေကူးနေတဲ့ သူ့ရဲ့ရေကူးနိုင်စွမ်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ကြွားလုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၈ မိနစ်ဆိုတော့ စက္ကန့်ပေါင်း ၄၈၀ ဖြစ်ကာ Lewis ရဲ့ ခံနိုင်ရည်အားကိုတော့ ကြည့်ရှုသူတွေက အံ့သြမဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
Lewis က “ဘယ်နေရာကိုကြည့်ကြည့် ပျော်နေတဲ့ရေခဲတွေကိုပဲမြင်ရမှာဖြစ်ပြီး ဒါထက်ပိုပြီးသဘောကျဖို့ကောင်းတာကတော့ ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာကြီးရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေမှုကြီးပါ။” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Lewis ဟာ အဆိုပါ ရေခဲပြင်ကြီးမှာ ရေကူးတာကို အပျော်သဘောမျိုးလုပ်တာမဟုတ်ဘဲ ရာသီဥတုရဲ့ ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုကို လူတွေကို သတိပေးချင်လို့ ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါသေးတယ်။
Previous ကနျြးမာပြျောရှငျတဲ့ဘဝကို ပိုငျဆိုငျရဖို့အတှကျ လြှိ့ဝှကျခကျြ (၅) ခကျြ။
Next အသကျငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ဆံပငျတှဖွေူလာတဲ့ ပွဿနာအရငျးအမွဈကဘာဖွဈမလဲ ? ? ?